स्वस्थ स्वास्थ्यका लागि फर्सी खानुको यस्ता छन् फाइदा ! - Everest Dainik - News from Nepal
स्वस्थ स्वास्थ्यका लागि फर्सी खानुको यस्ता छन् फाइदा !
फर्सीको मुन्टा र डल्लोमा भिटामिन ए प्रशस्त पाइन्छ । यसले कमलपित्त, क्षयरोग, बढी तिर्खा लाग्ने, कलेजोमा खटिरा भएमा औषधिका रूपमा समेत काम गर्छ । कब्जियत भएमा तथा टाउको दुखेमा पनि फर्सीले काम गर्छ ।
त्यस्तै पायल्स र शरीरभित्र जलन हुँदा पनि फलदायी हुन्छ ।
पहेंलो फर्सी खानाले शरीरमा ऊर्जा प्राप्त हुन्छ । फर्सीमा गुलियो पानीको मात्रा बढी हुने भएकाले मोटाउने रहर गर्नेका लागि फाइदाजनक हुन्छ । एजेन्सीको सहयोगबाट
ट्याग्स: Good Health